Wasaarada Arimaha Dibada Soomaaliya Oo uyertay Safiirka Imaaraatka iyo waxyaabihii la hordhigay – Daily Som
Wasaarada Arimaha Dibada Soomaaliya Oo uyertay Safiirka Imaaraatka iyo waxyaabihii la hordhigay
By Staff on March 27, 2018 No Comment
Wasiuiru dolwdaha Wasaarada arimaha Dibada Soomaaliya Abdul qaadir ahmed Khayr Abdi ayaa ku qaabilay Xaruhnta Wasaarada Safiirka Imaaraatka ee Muqdisho Maxamad Axmad Cusman Al Xammaadi.
Danjiraha Imaaraatka ayaa wax laga waydiinayay Arimaha Cakiran ee ka taagan Magaalada Berbera ee ee Hishooska Dekada ee DP World iyo Saldhiga Militariga ee UAE ka furaynso isla ,Magaalada kuwaas oo ay kala wada hadleen Maamulka Somaliland.
Safiirka Imaaraatka ayaa sheegay in dalkiisu uu Ixtiraamaayo isla markaana uu xushmad uhaayo wada jirka Soomaaliya taageerane ku bixiyaan sidii dalku uu uhagaagi lahaa.
War ay soo saartay Wasaarada ayaa lagu sheegay in ay Safiirka iyo Wasiiru dowlaha ay kawada hadleen Heshiiska Sharci darada ah ee dhex maray Soimaliland Itoobiya iyo shirkada DP World, kaas oo la xiriiray Dekada Soomaaliyeed ee berbera.
Warka ayaana lagu sheegay in shirkada ay ku xad gudubtay Madaxbanaanida iyo Midnimada dhuleeda ee Soomaaliya waxa ayna wasaarada Sheegtay in Xukuumadau ay u ogashahay in Barnaamijyoi Hormarineed laga hirgaliyo Guud ahaan dalka balsa ahshiiskaan uu yahay mid sharci daro ah isla markaana aan la aqbali karin, waxa ayna ku baaqaynsaa in shirkadaha iyo dalalka kasta oo doonaya uu maal gashado uu imaan karo isaga oo ilaalinaya Tiirarka qaran ee aanu leenahay iyada oo la ilaalinayo.
Safiirka Imaaraatka ayaa sheegay in dalkiisa ay si buuxdo uga Go’an tahay Ilaalinta, Xushmaynta iyo taageerida Madaxbanaanida Soomaaliya isaga oo sii raaciyay in ay ka go’antahay badqabka dhulka Soomaaliyeed, iyo iyaga oo wada tashi kala Samayn doona Balaarinta iyo iskjaashiga labada kja dhaxeeyo iyada oo la guninayo xiriirka ka dhaxeeyo Soomaaliya iyo Imaaraatka.
Wasaarada Arimaha Dibada Soomaaliya Oo uyertay Safiirka Imaaraatka iyo waxyaabihii la hordhigay added by Staff on March 27, 2018